Markab Dalxiis oo muddo 10 cisho nalalka u damiyay cabsi laga qabay weerar burcad badeed – Radio
Markab Dalxiis oo muddo 10 cisho nalalka u damiyay cabsi laga qabay weerar burcad badeed
August 8, 2017	188	Like
Markab kuwa dalxiiska ah oo muddo 104 maalmood u socdaalayay Sydney iyo Dubai ayaa lagu amray in nalalka laga damiyo illaa laga gaarayo waabariga, marka uu marayo biyaha qatarta badan ee burcad badeedka Soomaalida ka afduubtaan Maraakiibta.
Markabkan oo lagu magacaabo Princess ayaa dalxiisayaal gaaraya 2,000 oo ruux ka soo qaaday magaalada Sydney ee dalka Australia, waxay ku jireen safar raaxo ah, hase ahaatee mar kaliya ayay soo wajahday cabsi iyo argagax, markii lagu wargeliyay inay damiyaan nalalka, isla markaana joojiyaan muusiga iyo baashaalka, inta lagu guda jiro 10 cisho oo la marayo biyaha Gacanka Cadan, Badweynta Hindiya, Canal Suez iyo Badda Carabeed oo ah goobo qatar badan oo burcad badeedka Soomaalida weeraro ka fuliyeen sanadihii u dambeeyay.
Dalxiisayaasha saarnaa Markabkan ayaa waxaa midkiiba ku baxayay lacag dhan $55,000 oo dollar, mudada uu ku jiray safarka raaxada ah.
Kaptanka Markabka ayaa ku wargelisay dalxiisayaasha inay qolalkooda dhexda ka soo xirtaan, marka uu gabalka dhacana la daminayo nalalka, lana xirayo maqaayadaha iyo goobaha lagu ciyaaro Muusiga ee uu leeyahay Markabka.
Kabtan Gennaro Arma ayaa ka raali gelisay dalxiisayaasha rakaabka ah digniinta cabsida leh ee uu siiyay, maxaa yeelay waxay qatar ugu jireen mar kasta weerar kaga yimaada burcad badeedka.
Arrinta layaabka leh ayaa ah mudada 10-ka maalmood ee ay marayeen biyaha u dhow Xeebaha Soomaaliya, waxay ku jiraan cabsi fara badan iyo wal wal ay ka qabeen inay la kulmaan weeraro kaga yimaada burcad badeedka Soomaalida.
Weerarada Burcad badeedka ayaa hoos u dhac ku yimid, 5-tii sano ee u dambeysay, hase ahaatee bishii March ee sanadkan ayay kooxaha burcad badeedka markii u horeysay tan iyo sanadkii 2012 afduubtaan markab kuwa shidaalka qaada ah.
Xildhibaanad Samra Cumar ayaa beenisay wararka sheegaya in Ilaaladeeda ay dhalinyaro ku dileen magaalada Muqdisho, ...